Madasha oo caawa digniin culus u dirtay Farmaajo kadib go'aanadii soo baxay - Caasimada Online
Home Warar Madasha oo caawa digniin culus u dirtay Farmaajo kadib go’aanadii soo baxay
Madasha oo caawa digniin culus u dirtay Farmaajo kadib go’aanadii soo baxay
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa digniin loogu diray madaxweyne Farmaajo kadin go’aanadii ay golaha wasiirrada Soomaaliya ku ansixiyeen dhismaha hey’adda Batroolka iyo xubno cusub oo lagu biiriyey golaha adeega garsoorka.
Qoraalka ka soo baxay Madasha oo ka kooban todoba qodob ayaa lagu yiri, “Madashu waxey aad uga walaacsan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay Xukuumadda Xil-Gaarsiintu ku dhaqaaqdey shirkeedii Golaha Wasiirrada ee qabsoomay 30/07/2020 oo ay ku magacaabeen hay’ado Dastuuri ah sida Hay’adda Adeegga Garsoorka iyo Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed.”
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Madashu waxay ugu baaqeysaa hoggaanka DFS iyo Golaha Xukuumadda Xil-Gaarsiinta inay dhowraan, ilaaliyaanna shuruucda Dalka u yaal, gaar ahaan xilligan kala guurka ah ee uu Dalku marayo, taasoo haddaan la garowsan keeni karta khilaaf dastuuri ah iyo khalkhal siyaasadeed.”
“Madashu markay aragtay go’aammadii ka soo baxay golaha xukuumadda xil-gaarsiinta fadhigoodii 30-kii July 2020, markay akhriday war-saxaafadeedkii ka soo baxay Ururka Qareennada Soomaaliyeed, markay dhageysatay baaqii ka soo baxay Ururrada Bulshada Rayidka ah ee Soomaaliyeed iyo Xisbiyada Siyaasadeed ayna ogaatay walaaca bulshada Soomaaliyeed ee ku aaddan go’aannada sharciga ka weecsan ee ay ku tillaabsatay xukuumadda xil-gaarsiintu, waxay soo saartay qodobbadan hoos ku qoran.”
Madashu waxay garowsan tahay baahida loo qabo dhisidda Guddiyada Adeegga Garsoorka iyo Hay’adda Batroolka, kuwaaasoo la dhowrayay muddo ka badan saddex sano iyo bar, ayna ahayd inay dhisto Xukuumaddii haysatay kalsoonidii BJFS ama ay tahay in lala sugo inta lagasoo dhisayo xukuumad cusub oo hesha kalsoonida Baarlamaanka.
Xukuumadda hadda jirtaa waa Xukuumad Xil-Gaarsiineed (Caretaker Government) mana laha awood sharciyeed ay ku qaadan karto go’aanno masiiri ah ama ay ku meel marin karto guddi Dastuuri ah oo horey magacaabistiisii looga gaabiyay.
Waxaan uga digaynaa Madaxweynaha JFS in uusan ku soo saarin wareegto xubnahaas 5ta ah ee ka tirsan Golaha Adeegga Garsoorka inta la waafajinayo Dastuurka JFS.
In Shaqada Xukuumadda Xil-Gaarsiintu ay ku ekaato kaliya socodsiinta hawlaha caadiga ah ee xukuumadda inta reysul wasaare haysta kalsoonida Golaha Shacabka laga soo magacaabayo sida ku xusan Dastuurka Dalka qodobkiisa 103-aad.
In Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo ay qaadayso Xukuumadda Xil-Gaarsiintu isla markaana ay kula xisaabtamaan si joogto ah hawlaha ay qabanayaan inta reysal wasaare laga soo magacaabay.